How'd it happen and more reports?: ေတာင္းပန္ပါတယ္!
Excellent Video here, the kids have to be taught how And press him not to do so does not mind if the sense spins, In fact, most parents do when someone was not yet, so let's make love.
Parents need to make themselves.
The environment for children and their parents to accept, Please make ...
အရမ်းကောင်းတဲ့ Video လေးပါ...
ကလေးတွေ ကိုဘယ်လို ပုံစံနဲ့ဆုံးမ သွန်သင်ရလည်း ၊
ရိုက်ပြီးဆုံးမ လိုက်ယုံနဲ့ သူ့စိတ်ထဲမှာ အဲ့လိုအသိစိတ်ဓါတ် ဝင်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး ၊
နောက်တစ်ခုက မိဘတွေ ဆုံးမနေတဲ့အချိန် မှာ တစ်ယောက်ယောက်က ချစ်လို့ ဘဲဖြစ်စေ ဝင် ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် လည်း မဖြစ်သေးပါဘူး။
မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တာကို လုပ်ယူပေးဖို့လိုပါတယ်၊
ပတ်ဝန်းကျင် ကလည်း ကလေးတွေကို သူတို့မိဘတွေဆုံးမတာ ကိုလက်ခံပေးဖို့ပါ ၊
Posted by Ko Nge at Friday, July 07, 2017
Labels: ပညာေရး, လူမႈေရး